अन्तर्गत ब्रान्ड नाम "हरिण" उच्च-गुणवत्ता छोराछोरीको जूता को एक विशाल श्रेणी उत्पादन। यो विशेष र हाडजोर्नी सहित सबैभन्दा मांग ग्राहकहरु लागि आकारहरू र आकार को एक किसिम प्रस्तुत एक जुत्ता संसार छ। को जूता प्राकृतिक कच्चा माल को प्रयोग नयाँ प्रविधिहरू बनेको छ।
बच्चाहरू "हरिण" को लागि जूता: आकार चार्ट
बच्चाहरु - व्यापार ब्रान्ड उत्पादन "हरिण" को मुख्य प्रयोगकर्ताहरू। कम्पनी प्रति वर्ष एक लाख जोडी भन्दा बढी उत्पादन गर्छ। खुला र प्रकाश को ठूलो विकल्प गर्मी जूता, न्यानो जाडो र बन्द-सिजन। शैलीहरू एक किसिम यो सम्भव वर्ष पुरानो बच्चा र किशोर धारण बनाउँछ। यो जूता र चप्पल, जुत्ता र रबर जूता, सुरुचिपूर्ण जूता र न्यानो जाडो जूता। र पहिलो कदम लागि जुत्ता booties - सानो बच्चाहरु को लागि उत्पादन। आधारभूत सिद्धान्तहरू - यो व्यावहारिकता, छ गुणवत्ता र उचित मूल्य। यसका साथ यो ठूलो डिजाइन प्रसन्न, उमेर उपयुक्त र समाप्त रूपमा अभिनव कृत्रिम सामाग्री। सबै उत्पादनहरु बच्चाहरु र किशोरों लागि स्तर र उत्पादन सुरक्षा स्तर अनुपालन मा निर्मित छन्। सन्दर्भ मोडेल प्रयोग माल र जूता को कच्चा माल, "हरिण" को एक सिंहावलोकन दिन्छ। आकार चार्ट, प्याकेज उपलब्ध, तपाईं प्रयास बिना इच्छित विकल्प चयन गर्न अनुमति दिन्छ। कम्पनी को लोगो - छोराछोरी जुत्ता एउटा सानो हरिण - वयस्क र छोराछोरी दुवै चिन्ह।
सही जूता कसरी चयन गर्न
एक आसान काम - उपयुक्त जूता "हरिण" को लागि माथि बच्चालाई छनोट गर्न। आकार चार्ट यो गर्नेछ। बच्चा किनमेल र धेरै उपयुक्त सामना गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण जब बच्चा लागि चप्पल छनौट विचार लायक अंक हो। अक्सर बच्चा जूता सानो भएका छन् भन्ने महसुस गर्दैन। यसलाई आफ्नो विकास र नियन्त्रणमा हरेक दुई महिना बच्चाको खुट्टा मापन गर्न आवश्यक छ जूता को आकार। को खुट्टा को लाइन को लम्बाइ नाप्ने गरेर, आफ्नो बच्चा क्षणमा के आकार आवश्यक निर्धारण। बच्चाको खुट्टा शासक वा टेप उपाय हुन सक्छ मापन। बच्चाहरु पेन्सिल स्थितिमा स्थिति मा गत्ता मा खुट्टा वरिपरि कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। यो आवश्यक छैन वृद्धि लागि जूता खरीद छ। ठीक छ, जूता एउटा सानो एडी छ भने। हार्ड एडी स्थिति मा खुट्टा ठीक हुँदैन। 1.5 मिमी - को औंलाहरुमा र जुत्ता को खुट्टाको औंलासम्म बीच न्यूनतम दूरी। सही विकल्प लागि त्यहाँ आयोमी ग्रिड। "हरिण" - सान्त्वना र स्वास्थ्य मामलामा सबै आवश्यकताहरु पूरा उत्कृष्ट गुणस्तर को जूता। सजिलै लेबल मा संकेत आकार संग बच्चाको खुट्टा लम्बाइ तुलना गर्न तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
छोराछोरीको जूता, विशेष उद्देश्य
पारंपरिक मोडेल को रिलीज संग कम्पनी हाडजोर्नी जूता को निर्माण मा लगी भएको छ। छोराछोरीको खुट्टा को उचित विकासको लागि एक प्रारम्भिक उमेर देखि पालना गर्न आवश्यक छ। कम्पनी को एक विशेष कार्यक्रम यो सम्भव छोराछोरीको खुट्टा को सुविधाहरू एक डाक्टर निर्धारित व्यक्तिगत जूता को उत्पादन निदान गर्न, र त्यसपछि बनाउँछ। समतल खुट्टा र जुत्ता को विकास मा छोराछोरीको खुट्टा अन्य उल्लंघन हाडजोर्नी "हरिण" ठीक गर्न मदत गर्नेछ। आकार चार्ट तपाईं इच्छित विकल्प चयन गर्न मद्दत गर्नेछ।
छोराछोरीको जूता हेरचाह
छोराछोरीको जूता को लागत थोडा एक वयस्क भन्दा सानो। तर यसलाई धेरै छिटो पहनता। धेरै साधारण ख्याल। एकमात्र धोए गर्न सकिन्छ। माथिल्लो भाग एक नम कपडा संग साफ गर्नुपर्छ। भिजेको जूता मा सुकेको गर्न कोठा तापमान एक ventilated स्थानमा। विरूपण रोक्न, प्रत्येक अन्य माथि भिजेको जूता राख्नु छैन। पुराना ड्राई अखबार तिनीहरूलाई भर्न सक्नुहुन्छ। यो भिजेको रही देखि सुरक्षा, उपयुक्त क्रीम वा स्प्रे संग उपचार जूता सुकाएपछि।
कम्पनी "हरिण" (जूता) आकार चार्ट जो तिमी, बच्चाहरु र किशोरहरुको लागि सही जूता चयन गर्न deservedly धेरै पुरस्कार र पदक प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
शारीरिक प्रकार "नासपाती": peculiarities दराज को संकलनको
तारा देखि मास्टर वर्ग: Selena Gomez को शैली
कान मा घन्टी
सुशील र आफ्नै हातले स्टाइलिश समाधान: sheepskin कसरी बदल गर्न
एक शैक्षिक इलेक्ट्रोनिक स्रोत के हो?
कति बढ्न परेलाहरु? सुझाव र चाल: को परेलाहरु वृद्धि कसरी बढाउने
एक बिरालो आकर्षित गर्न कसरी विवरण (Anime)
फेनोसियन व्यापारीहरू। फेनोसियन व्यापारीहरू के बेचिएको